Sidee loo sameeyaa nidaam ilaalin fiidiyoow guri ah | Wararka Gadget
Sida loo dejiyo nidaam ilaalin fiidiyoow guri ah oo leh kamarad webka ama kamarad IP ah
Elvis bucatariu | | Streaming, Kaamirada
Haddii aad safreyso ama aad shaqeyneyso, mararka qaarkood waa muhiim in la ogaado in wax walba guriga ku hagaagaan. Xalalka qaar sida kamarada ilaalada Nest Cam (horay loo yiqiin Dropcam) waxbaa kuu fududeynaya adiga, laakiin waxaa jira habab badan oo aad ku fuulan karto nidaamka kormeerka ee gurigaaga.
Mawduucan waxaan ku sharxi doonnaa ikhtiyaarrada aad u leedahay inaad abuurto nidaam ilaalin fiidiyoow ah, laakiin adiga oo aan diiradda saarin nidaamyada amniga oo dhammaystiran ee keena alaarmiga iyo astaamaha kale ee horumarsan, laakiin kaliya kamaradaha guud ee kuu oggolaanaya inaad samee toos u socodsiinta ama samee cajalado duuban durugsan.
1 Kaamirooyinka ilaalinta fiilinta-iyo-ciyaar
2 Kaamirooyinka IP-yada
Kaamirooyinka ilaalinta fiilinta-iyo-ciyaar
Soo saarayaal badan ayaa isku dayaya inay wax u fududeeyaan dadka isticmaala waxayna bilaabeen inay bixiyaan "fur-iyo-ciyaar”Oo ku xidhan adeegyada webka qaarkood iyo barnaamijyada casriga ah. Si aad u isticmaasho kaamirooyinkaas uma baahnid inaad ku xirto kumbuyuutar ama adeeg kale. Waxa kaliya ee aad u baahan doontaa waa kamaradda lafteeda iyo qadka internetka.
La Nest Cam Google wuxuu u shaqeeyaa sidan. Si aad u isticmaasho waa inaad kaliya ku xir, ku xir akoon ka dibna waxaad ka heli kartaa sawirro toos ah shabakadda ama taleefankaaga casriga ah, marka lagu daro awood u lahaanshaha duubista otomaatiga ah.
Si kastaba ha noqotee, xafidaada cajaladaha noocan oo kale ah ayaa kugu kici doonta ugu yaraan 10 euro bishii, laakiin kaydinta xogta daruuraha ayaa ah faa'iido muhiim ah maxaa yeelay haddii qof u soo dhaco inuu kaa xado qalabkaaga, weli waxaad marin u heli doontaa duubitaannada laga soo qaado daruuraha. Guji halkan si aad uga iibsato Nest Cam qiimaha ugu fiican ee Amazon.
Alaabada kale ee la midka ah Nest Cam waxaa ka mid ah Kormeeraha Guriga, ka Belkin Netcam HD ama SimpliCam.
Qalabka kor ku xusan ayaa ka sahlan oo si fudud loo isticmaali karo, laakiin haddii aadan rabin inaad ku keydiso cajaladaha server-ka fog oo aad rabto marin dejinta horumarsan horeba mid Customization dheeraad ah, marwalba waad aadi kartaa "IP camera".
Kaamirada IP-ga waa kamarad fiidiyow oo dijitaal ah oo awood u leh u dir xogta borotokoolka internetka ee shabakad. Waa inaad qabataa dhowr goobood oo horumarsan haddii aad rabto inaad meel fog ka gasho fiidiyaha fiidiyowga ee internetka ama si fudud kamaraddu u keydiso fiidiyowyada qalab kale oo gurigaaga ah.
IP Kaameradda Amcrest IP2M-841B
Qaar ka mid ah kamaradaha IP-ga ayaa u baahan duubo fiidiyoow shabakaddahalka kuwo kale ay fiidiyowyadooda si toos ah ugu duubaan qalab NAS (kaydinta shabakadda ku lifaaqan) ama kombuyuutarka aad u qaabeysay inuu u shaqeeyo sidii adeege. Kaamirooyinka kale ee IP xitaa waxay leeyihiin boos kaararka microSD si ay toos ugu duubi karaan darawalkaas jireed.
Haddii aad abuureyso server kuu gaar ah, waa inaad iibsataa kamarad IP ah oo keeneysa barnaamij gaar ah taasi waxay ku siineysaa suurtagalnimadaan. Caadi ahaan, barnaamijkani xitaa wuu kuu oggolaan doonaa shabakadaha kamaradaha badan si aad u hesho aragti dhammaystiran oo ku saabsan gurigaaga.
Warka wanaagsani waa in kamaradaha IP-ga ay caadi ahaan ka jaban yihiin xalka furitaanka iyo ciyaarta sida Nest Cam, in kasta oo laga yaabo inaad bixiso lacag dheeraad ah si aad u isticmaasho barnaamijka aad dooratay.
Intii aad isticmaali lahayd kamarad IP ah, waxaad u adeegsan kartaa kamarad fudud si aad ugu xirto kumbuyuutar oo aad u isticmaasho barnaamijka wax lagu duubo.
Si ka duwan kamaradaha IP-ga, kaamirada websaydhku waa inay noqotaa si toos ah ugu xiran kumbuyuutarka adoo adeegsanaya USBhalka kamarada IP-ga ay noqon karto meelkasta oo guriga ka mid ah kuna shaqeyn karto Wi-Fi.
Si aad si sax ah ugu xirto kaamirada websaydhka, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato a video qabashada iyo duubista software loogu talagalay inuu la shaqeeyo kamaradaha webka oo aan ahayn kaliya kamaradaha IP-ga. Dheeraad ah, waa inaad haysataa PC-gaaga si joogto ah si webcam-ka uu ugu shaqeyn karo habka ilaalinta.
Hadaad kafekertay fuulitaanka nidaamka kormeerka fiidiyowga ee gurigaaga, talobixintayada ugu fiican ayaa ah inaad baarto waqti dheer kahor intaadan iibsan kamaradaha iyo softiweerka. Haddii aad iibsanayso kamarad fiilo-iyo-ciyaar ah, waa inaad maanka ku haysaa in lagu weydiin doono inaad bixiso lacag bille ah. Haddii aad iibsaneyso kamarad IP ama kamarad webka ah, raadi haddii ay leedahay dhammaan astaamaha aad u baahan tahay, maadaama tusaale ahaan kamaradaha oo dhami ma laha aragti habeen ama duubitaan tayo leh HD.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Kaamirada » Sida loo dejiyo nidaam ilaalin fiidiyoow guri ah oo leh kamarad webka ama kamarad IP ah
Sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loo xiro dhammaan tusmooyinka arjiga ee Windows
Talooyinka taxanaha ugu fiican ee TV-ga